बसेको बेला खुट्टा हल्लाइ रहनुहुन्छ ? यस्तो रो´ग लागेको हुनसक्छ – Butwal Sandesh
बसेको बेला खुट्टा हल्लाइ रहनुहुन्छ ? यस्तो रो´ग लागेको हुनसक्छ
केही मानिस बस्दाखेरी खुट्टा हल्लाइरहेका हुन्छन् । धेरैजनाले यो बानी मात्र भएको ठानेर बेवास्ता गर्छन् । तर यो एकप्रकारको रोट– रेस्टलेस सिन्ड्रोमको लक्षण हो । के हो यो सिन्ड्रोम र यसबाट कसरी छुटकारा पाउने ? चर्चा गरौं । खासमा यो एक स्नायु प्रणालीको रोग हो । गोडो हल्लाउँदा शरीरमा डोपामाइन हर्मोन आउन थाल्छ जसकारण व्यक्तिलाई घरिघरि हल्लाउन मन लाग्छ । डोपामाइनले सुखको अनुभूति दिलाउँछ ।
यो बानी र रो´गबाट छुटकारा पाउनका लागि तपाईंको जीवनशैली राम्रो हुन्छ र त्यसबाहेक तपाईंले केही अन्य कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।